खातामा आधारित मार्केटिंगमा Winning चरणहरू Martech Zone
बुधबार, अप्रिल 5, 2017 मंगलवार, अगस्त 1, 2017 Ishषि दवे
खातामा आधारित मार्केटिंग (एबीएम) B2B मार्केटरहरू बीच मैदान प्राप्त गर्दै छ। भर्खरको अध्ययन अनुसार २०१ B B2017B प्रोग्रामेटिक आउटलुक, B73B मार्केटरहरूको% 2% हाल प्रयोग गर्दछ वा २०१ 2017 मा ABM अपनाउने योजना बनाउँछ। र यो राम्रो कारणको लागि हो: ABM को ROI ले अन्य B2B मार्केटि invest लगानीहरूलाई जित्न सक्दछ।
ABM सायद नयाँ अवधारणा हो। वास्तवमा, केही तर्क गर्छन् कि एबीएम मार्केटिंग को रूपमा लामो समय को लागी थियो। यो एक रणनीति हो कि प्रत्येक खातालाई बजारको रूपमा व्यवहार गर्दछ, बिक्री र मार्केटिंग बीचको सम्पूर्ण सामंजस्यको लागि अनुमति दिदै।
आज, यो बजारमा बढि प्रयोगको कारण सजिलैसँग काममा लिइएको छ एक अर्कासँग जोडिएको डाटा र बलियो विश्लेषण मार्केटिंग भित्र। त्यसको शीर्षमा, डाटा थप भइरहेको छ वास्तविक समय र स्केलेबल डाटा-ए-ए-सेवा (डाएएस) प्लेटफर्मको माध्यमबाट। यी अन्तरदृष्टि मार्केटर्सलाई उनीहरूको सबैभन्दा आकर्षक खाताहरू अझ राम्ररी बुझ्न र पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ, जसले फलस्वरूप ती खाताहरूलाई बिक्री फनेल मार्फत संलग्न गराउँदा संसाधनहरूको प्राथमिकतामा लैजान्छ।
एबीएम यहाँ हाम्रो आफ्नो व्यवसाय विकास रणनीति केन्द्रीय भएको छ डन एण्ड ब्राडस्ट्रिटमा। हामी डाटा प्रयोग गर्छौं, विश्लेषण र नयाँ अवसरहरूको प्राथमिकतामा बिक्रीको साथ सहकार्य।
पर्याप्त सजिलो लाग्छ, हैन? यति छिटो होईन। जबकि यो सतहमा सरल देखिन्छ, एबीएम एक जटिल प्रक्रिया हुन सक्छ जुन स्मार्ट टोलीका लागि प्रयोग गर्दछ र तपाईंको टोलीका सबै सदस्यहरूबाट इनपुटको माग गर्दछ।
यहाँ पाँच चरणहरू छन् जुन तपाईंलाई तपाईंको व्यवसायको लागि एक विजयी ABM रणनीति विकास गर्न मद्दत गर्दछ।
चरण १: क्रस-कार्यात्मक टोलीहरू विकास गर्नुहोस्
डन एण्ड ब्रैडस्ट्रिटमा एबीएम स्केल गर्नुभन्दा पहिले हामीले हाम्रो संस्कृति, जानु-बाट-बजार रणनीति र सन्देशमा ध्यान केन्द्रित गर्‍यौं, जुन हाम्रो समग्र ब्रान्ड आधुनिकीकरणको अंशको रूपमा उद्देश्यको नवीकरण भाव र अद्यावधिक मानहरूको विकास समावेश छ।
हामीले व्यक्तिको वरिपरि सन्देश प्रवाह प्रणालीको विकास गर्‍यौं जुन हामीले समाधान गर्ने पीडित बिन्दुहरूसँग सम्बन्धित छ, जसले हाम्रो एबीएम रणनीतिको लागि जग बसाल्यो। तपाईंको डिजिटल मेसिन कत्ति राम्रो छ, यदि तपाईंसँग भन्न केहि फरक छैन र यसलाई समर्थन गर्ने संस्कृति छ भने, तपाईं सम्भवतः गडबडको माध्यम भाँच्नुहुन्न।
त्यहाँबाट हामीले क्रस-फंक्शनल "टाइगर टोलीहरू" विकास गरेका छौं जुन प्रत्येक मार्केटि। कार्यका सदस्यहरू हुन्। यी टोलीहरू, जसलाई व्यक्तित्वहरू द्वारा व्यवस्थित गरिएको छ, अब पारम्परिक सिलोहरू मार्फत विस्तार गर्न सक्षम छन्, व्यापक सोचलाई प्रोत्साहित गर्दै र क्रियान्वित कार्यहरू हाम्रो क्रिएटिभको पूर्ण सामर्थ्यसँग परियोजनाहरूको सामना गर्ने सुनिश्चित गर्न, विश्लेषण, टेक्नोलोजी, संचार र डिजिटल टोलीहरू प्रत्येक व्यक्तित्व द्वारा अनुभव ड्राइभ गर्न।
चरण २: कुञ्जी खाताहरू पहिचान गर्नुहोस्
तपाईको पहल अगाडि बढ्नु हुँदैन जब सम्म दुबै बिक्री र मार्केटिंग खाता छनौट मापदण्डमा सहमत हुँदैन र, अन्ततः तपाईको लक्षित व्यवसाय। कुन सुविधाहरू वा विशेषताहरूले तपाईंको लागि उच्च-मूल्य खाता (र तपाईंको मालिक) लाई स indicate्केत गर्दछ? यो सबै तपाइँको कम्पनी, तपाइँको प्राथमिकता, र कुन डाटा र मा निर्भर गर्दछ विश्लेषण मोडेलहरूले विगतमा भविष्यवाणी गर्ने मूल्य प्रदर्शन गरेका छन्।
हामी दुन र ब्राडस्ट्रिटमा समान पहुँचको लागि भाग्यशाली छौं डाटा र विश्लेषण क्षमताहरू हामी हाम्रा ग्राहकहरूको लागि विकास गर्दछौं। हामीसँग प्रोपेन्सिटी र एट्रीसन एनालिटिक्स मोडलहरू हामीसँग बताउँन कि हामीसँग उनीहरूको सम्बन्ध बढ्ने सम्भावना को छ, कसलाई हामी सम्भवतः क्रस-बेच्न सक्दछौं र जसले नवीकरण नगर्ने सम्भावित जोखिम राख्छन्।
आंशिक रूप मा डिमांड अनुमान मोडल हेर्नुहोस् lookaleke मोडलि usमा हामीलाई बताउनुहोस् कुन खाता र व्यवसायका रेखाहरूले हाम्रो लागि उत्तम अवसर दिन्छ। उदाहरण को लागी, हाम्रो आफ्नै ग्राहक आधार को विश्लेषण मा, निकट भविष्यमा विकास संग संघर्ष को भविष्यवाणी गरीरहेका कम्पनीहरु वास्तव मा हाम्रो बिक्री र मार्केटिंग समाधान मा चासो हुन बढी सम्भावना थियो। र माग अनुमान मोडेलले हामीलाई खाता किनेको सम्भावित भन्दा बाहिर सार्दछ - ती हामीलाई सम्झौताको आकार के हुन सक्छ भनेर भविष्यवाणी गर्न मद्दत गर्छन्।
विभाजनका लागि हामी बिक्री मोडलहरू कसरी हेर्छौं जुन हामी कसरी पहिले नै ठाडो, आकार, खरीद व्यवहार र खरीद गर्नका लागि प्रशंसकबाट सफल भएका छौं। सेवा विश्लेषण कुन पोस्ट बिक्री प्रयासहरूले नविकरण निम्त्याउँछ भन्ने मूल्या assess्कन गर्नुहोस्, जुन उच्च जोखिम र उच्च-मूल्य ग्राहकहरू प्रति यी सीमित संसाधनहरूलाई केन्द्रित गर्न महत्वपूर्ण छ। बिक्री र मार्केटिंग प्राथमिकता खाता आधारित गो बजारमा पहल र व्यक्तित्वमा आधारित सन्देशको लागि फोकसको प्रमुख क्षेत्रहरु लाई सूचित गर्दछ।
चरण:: तपाईंको व्यक्तित्व-आधारित सन्देश क्राफ्ट गर्नुहोस्
B2B खरीदहरूमा बहु प्रभावकारीहरू र खरीदकर्ताहरू सामेल छन्, यसको मतलब तपाईंले अझै पनि बहुविध व्यक्तिहरू विकास गर्नु पर्ने हुन्छ जसलाई निर्दिष्ट सन्देश आवश्यक पर्दछ।
र आशा छ, अब तपाईले तपाईको सब भन्दा आकर्षक ग्राहकहरु लाई चिन्नु भएको छ, तपाईसँग उनीहरुसंग कसरी कुरा गर्ने भन्ने बारे राम्रो ज्ञान हुनुपर्दछ। न केवल तपाईं तिनीहरूको सबैभन्दा ठूला चुनौतीहरू, पेन पोइन्टहरू र लक्ष्यहरू लक्षित गर्न सक्षम हुनुहुनेछ, तर तपाईं विशेष मार्केटि channels च्यानलहरू पहिचान गर्न पनि सक्षम हुनुहुनेछ जुन तिनीहरू सबैभन्दा सक्रिय छन्। यसले तपाइँलाई कसरी निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ तपाइँको सन्देशन को निजीकृत.
चाहे यो ईमेल वा सिधा मेल, वा डिजिटल माध्यमहरू मार्फत होस्, तपाईंले स्मार्ट सामग्री मार्केटि strategy रणनीति विकास गर्न आवश्यक छ जुन उनीहरूको भाषा बोल्छ र तिनीहरूलाई लक्ष्यहरू पूरा गर्न मद्दत गर्दछ। दिनको अन्त्यमा, यो तपाईंको बारेमा होइन; यो उनीहरूको बारेमा हो। त्यो टोन हो जसले सब भन्दा गाह्रो खाताहरूको साथ ढोका खोल्न मद्दत गर्दछ।
चरण:: यो कार्यान्वयन गर्ने समय हो
जब तपाईं माथिका रणनीतिहरू कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ, तपाईंको अभियानहरूको प्रभाव नाप्न र भविष्यको अनुकूलन सूचित गर्न KPI मा भर पर्नु महत्त्वपूर्ण छ। एक सफल एबीएम रणनीतिको औंलाले यी चार मेट्रिक्सको नाडीमा छ:
सगाई: आवाजले प्रभुत्व जमाएको व्यापार वातावरणमा, सगाई ड्राइभ गर्न उत्तम तरिका भनेको ग्राहकको डिजिटल अनुभव निजीकृत गर्नु हो। महत्वपूर्ण मेट्रिक्समा हेर्नु महत्त्वपूर्ण छ जस्तै महत्त्वपूर्ण अवतरण पृष्ठहरूमा क्लिकहरू, साइटमा समय खर्च गरिएको र ग्राहक रूपान्तरण यी ग्राहकहरू तपाईंको सन्देशमा कत्तिको उत्तरदायी छन् भनेर हेर्न।
ग्राहक सन्तुष्टि: ग्राहकहरूको सन्तुष्टिमा परिवर्तनहरू तपाईंको भविष्यको राजस्व वृद्धिसँग जोडिएको छ। तपाईं तिनीहरूलाई व्यक्तिगत ग्राहक सर्वेक्षण, ठूलो नेटप्रोमोटर स्कोरहरू, व्यवसाय सफ्टवेयर समीक्षा प्लेटफर्महरू र सामाजिक मिडिया छलफलहरू मार्फत मापन गर्न सक्नुहुनेछ।
पाइपलाइन: यो सीधा हो, तर तपाईंको बिक्री पाइपलाइनको प्रत्येक चरणमा प्रतिक्रियाले तपाईंलाई तपाईंको ग्राहकहरूको प्रतिबद्धता स्तरको स .्केत दिनेछ। तपाईको ग्राहकहरुसंग जति बढी स ,्लग्न हुनुहुन्छ, तपाईको पाइपलाइन त्यति नै मोटो हुनेछ।
मात्रा: यो एक सफल एबीएम रणनीतिको अन्तिम सूचक हो - किनकि दिनको अन्त्यमा, यो लेडहरू जेनेरेटको बारेमा होइन, तर खाताहरू जित्यो। तपाईंको सम्झौताको वेग कति बढेको छ? के तपाईंको औसत अनुबंध मान बढेको छ?
चरण:: सबै कुरा मापन गर्न नबिर्सनुहोस्
एबीएम पहलहरू बढ्न र परिपक्व हुन समय चाहिन्छ। याद गर्नुहोस्, तपाईको रिच डाटा र अन्तरदृष्टि आवश्यक पर्दछ तपाईको कुराकानीलाई ब्यक्तिगत गर्न र तपाईको खाता सम्बन्धहरुलाई सुदृढ पार्न। यदि अनुचित तरिकाले कायम गरियो भने, ABM अवसरहरू स्टाल हुन सक्छन्। र अन्य चरममा, खाता सम्बन्धहरू चाँडै नै हट्न सक्दछ, अन्य एबीएम-सम्बन्धित चरणहरूको विकासको घुटसाघ गर्दै तपाईंले अझै पनि लिनुपर्दछ।
एक एबीएम रणनीतिमा शिफ्ट बनाउनाले तपाईंलाई तपाईंको सबैभन्दा ठूलो विकासको क्षेत्रहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ र अन्ततः नयाँ व्यापार जित्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। तर यसले तपाईको डेटा र समग्र टोलीको समन्वयको गहिरो समझ लिन्छ। अन्यथा, तपाइँ तपाइँको बहुमूल्य ग्राहकहरु बाट नयाँ व्यापार ड्राइभ गर्न को लागी कुञ्जी अवसरहरु गुमाउन सक्छ।
टैग: abmखाता आधारित मार्केटिंगb2bव्यापार गर्न व्यापारdnbडुन र ब्राडस्ट्रिट
Ishषि दवे यसको लागि प्रमुख बजार अधिकारी हुन् डन र ब्राडस्ट्रिट। षि फेब्रुअरी २०१ in मा डेलबाट डन र ब्राडस्ट्रिटमा सामेल भए जहाँ उनी डिजिटल मार्केटिंगका कार्यकारी निर्देशक थिए। षिले रासायनिक ईन्जिनियरि and र अर्थशास्त्रको डिग्री स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीबाट सम्मान र पेन्सिलभेनिया विश्वविद्यालयको हार्टन स्कूलबाट मार्केटिंगमा एमबीए गरेकी छिन्।